Alatsinainy 22 Febroary 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Matt Chandler
Izay niasa tamina sehatry ny asa lehibe dia tsy isalasalana fa nitaraina imbetsaka izy fa tsy fantatry ny tanana ankavanana ny ataon'ny tanana ankavia. Ao amin'ny tontolon'ny fampifandraisana an-tserasera amin'ny media mahazatra, hita miharihary izao.
Ny fifantohana amin'ny antsipiriany sy ny onjam-pifandraisana tsy tapaka dia zava-dehibe amin'ny orinasa rehetra, na lehibe izany. Dingana tsotra izay miteraka fahatapahana fifandraisana tsy manara-penitra na lesoka ara-typografika kely indrindra dia mety hisy fiovana lehibe.
Zava-manahirana: Denny ny trano fisakafoanana. Ny menus sakafo hariva vaovao namboarin'izy ireo sy nozaraina tamin'ny fararano lasa teo dia misy CTA iray ho Mifandraisa amin'ny resadresaka ao amin'ny pejy Facebook sy Twitter an'i Denny, ary ny tranokalan'izy ireo. Olana kely iray: lisitra ny ID Twitter diso.
Araka ny iray tatitra vao haingana CNET News, menus nozaraina tamin'ny toerana manodidina ny 1,500 XNUMX an'i Denny manerana ny firenena lisitra karatra Twitter an'ny lehilahy iray any Taiwan. Denny's dia voalaza fa miara-miasa amin'ny Twitter handray ilay ID, izay tsy nihetsika nandritra ny enim-bolana mahery.
Ity tranga ity dia maneho ny filàn'ny fifandraisana eo amin'ny marketing nomerika sy nentim-paharazana. Marina fa ny ankamaroan'ny olona mipetraka hisakafo hariva angamba dia tsy hijery an'i Denny ao amin'ny Twitter raha mipetraka eo ambony latabatra. Saingy ity karazana snafu ity amin'ny toe-javatra hafa dia mety hanimba.
Mety ho azo antoka ny fieritreretana fa i Denny's dia nisoratra anarana twitter.com/dennys, toa azy ireo ihany koa dennys.com. Saingy tsy nanao izany, ary fantatrao izay lazain'izy ireo momba izay mitranga rehefa mieritreritra ianao.
Ahoana raha ny lesoka iray ihany no natao tamin'ny toerana TV na doka pirinty? Sa amin'ny paositra mivantana na carte postaly na newsletter? Ny marketing sy ny serasera dia tokony hifandray mivantana sy tsy tapaka miaraka amin'ny Interactive mba hisorohana io karazana lesoka io tsy hanimba na dia ny ezaka varotra ifaneraserana tsara indrindra aza.
Ny fanontana menus vaovao dia mety toa tsy niantso ny fidiran'ny ekipa Interactive. Fa ankehitriny na dia ny fitaovan'ny orinasa taloha indrindra aza dia misy singa dizitaly, toy ny URL. Ny fitaovam-pifandraisan-davitra - nentim-paharazana sy niomerika – dia tokony hirotsaka an-tsehatra amin'ny fandrafetana ny drafitra ho an'ny tetikasa rehetra hahazoana antoka fa miray hina.
Tags: Denny nyFacebookTwitter
Matt no Digital Content Manager ho an'ny Ingersoll Rand Security Technologies, ary mpampianatra mpampiana amin'ny Web Marketing ao amin'ny Art Institute of Indianapolis. Manana traikefa 10 taona mahery izy tamin'ny famoronana paikady sy fitantanana atiny an-tserasera ho an'ireo orinasam-pandraharahana ao anatin'izany Raidious, NYU Langone Medical Center ary Tambajotra ara-pahasalamana ho an'ny fiarahamonina. Izy koa dia manana fanangonana firaketana horonantsary vinyl mampihomehy ary pug antsoina hoe George Benson.